yekutanga OS 5.1.2 ikozvino yavapo, nemhinduro kune iyo Sudo bug | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura, imwe yeakagadziriswa-akagadzirwa Ubuntu-based distros yakaburitsa nyowani diki yekuvandudza Ndezve yekutanga OS 5.1.2 Hera, inovawo chikamu chekutanga kusvika mushure mekuburitswa kunotsanangura pano. Imwe yedzakakurumbira misiyano inouya neichi chitsva chishandiso che "Elemental" inoshanda sisitimu ndeyekuti vakagadzirisa bhagi muSudo iro raive riripo kweanopfuura makore gumi.
yekutanga OS 5.1.2 inosvika mwedzi miviri mushure meiyo previous version pamwe nekumwe kuvandudzwa, senge zvese zvakagadziridzwa nenzira yemapakeji akaburitswa muna Ndira 2020. Pakati pemapakeji akagadziridzwa isu tine Code 3.2 kana iyo Terminal, iyo yakaiswa kune vhezheni 5.1.1. Iyo System Zvido uye File Manager zvakagadziridzwa zvakare. Kune rimwe divi, zvigadzirwa zvehurdware uye zvekuchengetedza zvakawedzerwa, senge zvambotaurwa Sudo akatadza.
yekutanga OS 5.1.2 inosvika neakagadziridzwa mapakeji
Mwedzi mishoma yapfuura, isu takagovana maitiro edu ekuburitswa akachinja nekufamba kwenguva, uye yekutanga OS 5.1 Hera kuburitswa kwakaratidza kekutanga nguva patakavaka yakagadzikana ISO yeiyo yekutanga OS kuburikidza neyedu nyowani yakavhurika sosi pombi. Nemaitiro matsva, zvave nyore kwazvo kumaka uye kuburitsa inowedzera yekuvaka yeiyo inoshanda sisitimu, uye zvichiteerana nhasi taburitsa twist nyowani paIO 5.1.
Iyo Sudo bug yakanga iri njodzi iyo yakabvumira vashandisi kuwana midzi yekuwana pane zvishandiso uko pwfeedback yakagoneswa uye iyo Sudo vhezheni yaive yakaderera pane v1.8.26. Iyo idhivha iyo kumwe kugoverwa kwavakagadzirisawo svondo rino, senge Debian uye ese epamutemo Ubuntu flavour.
yekutanga OS 5.1.2 inosanganisirawo mune yayo ISO iyo yazvino HWE (Hardware inogonesa) ye Ubuntu 18.04.3. Vashandisi vanofarira kuita yakachena kuisa vanogona kurodha pasi iyo itsva ISO kubva Iyi link. Vashandisi varipo vanogashira zvese zvavo zvekuvandudza kubva kune imwecheteyo sisitimu yekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » yekutanga OS 5.1.2 ikozvino yavapo, nemhinduro kune iyo Sudo bug uye nedzimwe nhau
Windows Virtual Desktop inouya kuLinux nekutenda kune mutengi wakagadzirwa neIGEL